काठमाडौं, २९ कात्तिक- जब शीर्ष डिभिजनको लिग सुरु हुन्छ, तब एकै पटक देशको फुटबलका सबै पक्ष चलायमान हुन्छन् । नेपालमा पनि केही दिनमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सुरु हुँदै छ । स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय फुटबलको मेरुदण्ड मानिने लिग सुरु हुन लाग्दा नेपाली फुटबल तरंगित छ ।
३ मंसिरबदेखि सुरु हुने लिगका अधिकांश खेलहरू ‘फ्लड लाइट’मा खेलाउने अखिल नेपाल फुटबल संघको तयारी छ । दशरथ रंगशाला र सातदोबाटोको एन्फा कम्प्लेक्समा लिग गराउने पक्का भइसकेको छ । यसका साथै च्यासलको मैदान र पोखरा रंगशालामा पनि केही खेल लैजाने प्रयास भइरहेको छ । यसपालि लिगको अर्को नयाँ पक्ष भनेको प्रतियोगिताका खेलहरू सातामा तीन दिन शुक्रबार, शनिबार र आइतबार मात्र गराइने भएको छ ।
नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले लिग आयोजना गर्न लिग कमिटी नै बनाएको छ ।
लिगकै कारण जुनसुकै देशको फुटबल माथिल्लो स्तरमा पुग्छ र खेलाडीको वृत्ति विकास हुन्छ । तर, नेपालमा ?
‘यो साह्रै दु:खको कुरा हो । हाम्रोमा लिगका जानकार भन्नेहरूले फुटबलको राजनीति गरे । त्यसले गर्दा लिगले धेरै रूप पायो । हाम्रोमा फुटबलको विषयमा कसैले पनि रिसर्च गर्नै चाहेन । लिग गर्न एकै पटक ठूलो काम गर्छु भन्नै पर्दैन, जुन हाम्रोमा हुन सकेन,’ पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा हाल विभागीय टोली एपीएफ फुटबल क्लबका प्रशिक्षक कुमार थापा भन्छन् ।
‘हाम्रोमा काम भन्दा भाषण ठूलो भयो । एन्फाले राजनीतिक नियुक्तिका भरमा लिग कमिटीमा मान्छे ल्याउँछ । उनीहरूले अनि के गरून् ? उनीहरूले लिग गर्नका लागि मात्र गर्छन् । लिग राम्रो गराउन एन्फाले सबै हेर्ने होइन, लिग कमिटीले लिग कसरी गर्ने, कसरी लैजाने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । लिग कमिटीसँग भिजन हुनुपर्छ । यो कमिटीका मान्छेसँग छैन । मान्छेले फुटबलको इतिहास जानेको भरमा कमिटीमा टिकेर बसेका छन्,’ कीर्तिमानी आठ पटक लिग उपाधि विजेता मनाङ-मर्स्याङ्दी क्लबको स्वर्णकालका कप्तान थापा भन्छन् ।
‘नेपालमा लिग बढी हुनुको कारण भनेकै संघ (एन्फा)मा स्थायित्व नहुनु हो । संघमा आएपछि जसले पनि आफूअनुकूलको लिग गर्न थाले । क्लबमा पनि लिगको संस्कार बसेन । लिग काठमाडौंमै खेल्नुपर्छ भन्ने भयो । फुटबलमा जबसम्म यो हाम्रालागि उत्तम भनेर पाउँदैनौँ, त्यो बेलासम्म प्रयोग हुनु नौलो होइन, त्यो भइरहन्छ ।’